वालिङका उपप्रमुख तिवारीलाई पितृशोक
शनिबार7साउन,२०७८
स्याङ्जा, साउन १ गते । वालिङ नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीलाई पितृशोक परेको छ । उपप्रमुखका पिता भीमलाल तिवारीको आज ७१ वर्षको उमेरमा वालिङमा निधन भएको हो । यसअघि कुनैपनि किसिमको स्वास्थ्य समस्या नभएता पनि पिताको आज बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको परिवारिक भनाई छ ।
स्वर्गीय तिवारीका वालिङ नगर उपप्रमुख एवं नेपाल महिला संघ जिल्ला अध्यक्ष कल्पना तिवारीसहित दुई छोरी र तीन छोरा छन् । स्वर्गीय तिवारीको शवलाई आज नै रामनदीधाम राम्दीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
यस्तै नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीका पिता भीमलाल तिवारीको निधनप्रति वालिङ नगरपालिकाले दुःख ब्यक्त गरेको छ । नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले शुक्रबार शोक वक्तब्य जारी गर्दै तिवारीको निधनले एक असल अभिभावक गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । तिवारीको निधनप्रति दुःख ब्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको कामनासहित शोककुल परिवारमा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
स्वर्गीय तिवारीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली काँग्रेस स्याङ्जासहित वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले शोकसभाको आयोजना गरेका थिए ।
मिर्मी क्याम्पसकाे प्रमुखमा पाण्डे नियुक्त
फेदीखोला गाउँपालिकाको बजेटः ३६ करोड ८९ लाख
पुतलीबजारले गर्‍याे १४ कर्मचारीको बढुवा, २९ को ग्रेड बृद्धि
गल्याङका नगरप्रमुखले कृषकहरुलाई भने–अनुदानमा भन्दा बजारीकरणमा जोड दिऔं
'राम्दी पुल तरने बित्तिकै'
भीरकाेट राज्य अन्तर्गतकाे बयारघारी बजार !
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनः ६४ जिल्लाका पालिका अधिवेशन आजबाट शुरु, प्यानलै खडा गरेर निर्वाचनमा होमिदै
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहान ११ बजे बस्दै
सरकारको कामकार्वाही कछुवागति भन्दा कम–पूर्वप्रधानमन्त्री ओली
११ वर्ष पार्टी सभापति चलाएका कुल बहादुर गुरुङ नेकपा (एमाले) प्रवेश !
‘सिस्सा’ प्रकरणः सञ्चालक श्रेष्ठलाई जर्बजस्ती करणी उद्योगमा म्याद थपियो, घाईते कर्मचारीको ललितपुरमा उपचार हुदै
भरतमणीले जिते ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन–२’ उपाधि